NUG ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုင်ရာသဘောထား ကန်ဝန်ကြီး Blinken ကြိုဆို - ARAKAN TIME
Home / World History / World News / NUG ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုင်ရာသဘောထား ကန်ဝန်ကြီး Blinken ကြိုဆို
by ARAKAN TIME on June 08, 2021 in World History, World News
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Antony Blinken
ရိုဟင်ဂျာအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်သူအားလုံး ရဲ့ လူ့အခွင့်ရေးရပိုင်ခွင့်အတွက် လေးစားမှု နဲ့အတူ လုံခြုံစိတ်ချရမှု ငြိမ်းချမ်းမှုတွေရှိအောင် အမေရိကန်နိုင်ငံက အားပေးထောက်ခံဖို့ သန္နိဋ္ဌာန် ချထားကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Antony Blinken က သူ့တွစ်တာကနေ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
We are committed to promoting peace, security, & respect for human rights of all people in Burma, including Rohingya. The NUG's pledge to address discrimination & human rights abuses against Rohingya is an important signal to all those working for an inclusive, democratic future.)"
အရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH က ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ NUG က မကြာသေးခင်ကမှာ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ အပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေ လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာတွေ ကို ပြုပြင်ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းမယ် ဆိုတဲ့ ကတိပေးချက်ဟာ အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီ ကာလ အတွက် အလုံးစုံပါဝင် ဆောင်ရွက်ရေး အတွက် အရေးပါတဲ့ ပြောဆိုချက်ဖြစ်ကြောင်းလည်း တနင်္ဂနွေနေ့က ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်အမေရိကန်သံရုံးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Wendy Sherman ရဲ့ ပြောကြားချက်ကို တနင်္လာနေ့ သူ့ facebook စာမျက်နှာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကျဆုံးနိုင်ငံတခု အဖြစ် ဦးတည်နေပြီဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ကိုဗစ်- ၁၉ ဒဏ် သာမက စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှု ခြိမ်းခြောက် နှောက်ယှက်မှုတွေ ခံနေရသလို နိုင်ငံတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အခက်အခဲတွေ ကြီးကြီးမားမား ကြုံနေရတယ် ဆိုတာကို သိထားပြီး နိုင်ငံတကာက တညီတညွတ်ထဲ တုံ့ပြန်ဖို့ တောင်းဆိုထားတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေ ရပ်တန့်ဖို့၊ မတရားဖမ်းဆီးထားသူအားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်လျှောက်လှမ်းလာစေဖို့ စစ်အာဏာရှင်ကို နိုင်ငံတကာက တညီတညွတ်ထဲ ပြောဆိုပြီး ဖိအားပေးဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တိုက်တွန်းကြောင်း ဖေါ်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
NUG ရဲ့ ရိုဟငျဂြာဆိုငျရာသဘောထား ကနျဝနျကွီး Blinken ကွိုဆို
ရိုဟငျဂြာအပါအဝငျ မွနျမာနိုငျငံမှာ နထေိုငျသူအားလုံး ရဲ့ လူ့အခှငျ့ရေးရပိုငျခှငျ့အတှကျ လေးစားမှု နဲ့အတူ လုံခွုံစိတျခရြမှု ငွိမျးခမျြးမှုတှရှေိအောငျ အမရေိကနျနိုငျငံက အားပေးထောကျခံဖို့ သန်နိဋ်ဌာနျ ခထြားကွောငျး အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Antony Blinken က သူ့တှဈတာကနေ ပွောကွားလိုကျပါတယျ။
အရှေးကောကျခံလှတျတျောအမတျတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ပွညျထောငျစုလှတျတျောကိုယျစားပွုကျောမတီ CRPH က ဖှဲ့စညျးခဲ့တဲ့ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ NUG က မကွာသေးခငျကမှာ ထုတျပွနျခကျြထဲမှာ ရိုဟငျဂြာတှေ အပျေါခှဲခွားဆကျဆံတာတှေ လူ့အခှငျ့ရေးခြိုးဖောကျတာတှေ ကို ပွုပွငျကိုငျတှယျ ဖွရှေငျးမယျ ဆိုတဲ့ ကတိပေးခကျြဟာ အနာဂတျ ဒီမိုကရစေီ ကာလ အတှကျ အလုံးစုံပါဝငျ ဆောငျရှကျရေး အတှကျ အရေးပါတဲ့ ပွောဆိုခကျြဖွဈကွောငျးလညျး တနင်ျဂနှနေကေ့ ပွောဆိုခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ရနျကုနျအမရေိကနျသံရုံးကလညျး မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ပတျသကျပွီး အမရေိကနျ ဒုတိယနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Wendy Sherman ရဲ့ ပွောကွားခကျြကို တနင်ျလာနေ့ သူ့ facebook စာမကျြနှာမှာ ဖျေါပွထားပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံဟာ ကဆြုံးနိုငျငံတခု အဖွဈ ဦးတညျနပွေီဖွဈပွီး လှတျလပျမှုကို မွတျနိုးတဲ့ မွနျမာပွညျသူတှေ အနနေဲ့ ကိုဗဈ- ၁၉ ဒဏျ သာမက စဈအာဏာရှငျရဲ့ တိုကျခိုကျမှု ခွိမျးခွောကျ နှောကျယှကျမှုတှေ ခံနရေသလို နိုငျငံတှငျး လူသားခငျြးစာနာမှု အခကျအခဲတှေ ကွီးကွီးမားမား ကွုံနရေတယျ ဆိုတာကို သိထားပွီး နိုငျငံတကာက တညီတညှတျထဲ တုံ့ပွနျဖို့ တောငျးဆိုထားတာပါ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျး အကွမျးဖကျမှုတှေ ရပျတနျ့ဖို့၊ မတရားဖမျးဆီးထားသူအားလုံးကို ပွနျလှတျပေးဖို့နဲ့ မွနျမာနိုငျငံ ဒီမိုကရစေီ လမျးကွောငျးပျေါ ပွနျလြှောကျလှမျးလာစဖေို့ စဈအာဏာရှငျကို နိုငျငံတကာက တညီတညှတျထဲ ပွောဆိုပွီး ဖိအားပေးဖို့ အမရေိကနျပွညျထောငျစုက တိုကျတှနျးကွောငျး ဖျေါပွထားတာ ဖွဈပါတယျ။
Tags # World History # World News
By ARAKAN TIME at June 08, 2021
Tags: World History, World News